Buy For 39 000$
Warranty Expiry Date 13 . Jan . 2020
Insurance Expiry Date 26 . April . 2018
လှပသော အချိုးအကွေ့ များဖြင့် Sport ဆန်ဆန်ဖန်းတီးထုတ်လုပ်ထားသော KIA Optima Saloon
. ပုံမှန် Saloon များနှင့်မတူ ထူးခြားသောခံစားချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့် KIA Optima
လမ်းများပေါ်တွင် လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင်ငေးမောနေရလောက်အောင် သပ်ရပ်လှပသောအချိုးအကွေ့ များ၊ လင်းယုန်ငှ က် တစ်ကောင်၏ အင်အားအပြည့်ဖြင့်တောင်ပံဖြန့်ပြီးအမြင့်သို့ ပျံဝဲတော့မည့်ပမာ Design ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော KIA Optima Luxury Saloon
. KIA Optima ၏ ထိုင်ခုံများမှာ Leather Seats များဖြစ်သော ကြောင့်ရိုးရိုး cloths seats ထက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာသွားလာနိုင်သည့်အပြင်မတော်တဆ ကားပေါ်တွင် ဖိတ်စင် စွန်ထင်းခြင်းများကို အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်င်ခြင်းနှင့် အနံ့အသက် ဆိုးများထွက်ခြင်း မှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
. KIA Optima သည် 2000 CC Gasoline Engine ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
.6Speed Automatic Transmission အပြင်Manual Transmission တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်ကုန်းအမြင့်အတက်အဆင်းများ နှုင့် ခရီးသွားတောင်တက်လမ်းများတွင်လည်းအဆင်ပြေချောမွေ့စေမှာဖြစ်ပါသည်။
. LED Daytime Running Light ပါဝင်သောကြောင့်နေ့ဘက်တွင် လမ်းပေါ်၌အခြားကားများ နှင့် မတူဘဲကွဲပြားခြားနားစွာလှပနေသည်ကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
LED front fog lamp မှာလည်း sport ဆန်ဆန် နှင်းခွဲမီးသေး (4) လုံးပူးတွဲ၍ထပ်မံပါဝင်သောကြောင့် ဆောင်းတွင်းအခါနှင့်မြူဆိုင်းသော အချိန်များ၌ကား မောင်းနှင်ရာတွင် ရှေ့သို့ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
. Head lamp washer ပါဝင်သောကြောင့် High way ခရီးသွားလာလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရှေ့မီးကြီးမီးထွန်းရာတွင် အနှေုာင့်အယှက်ဖြစ်စေမည်ဖုန်၊ အမှိုက်သရိုက် များ ကပ်ညှိနေပါက ကားမောင်းနှင်နေရင်းဖြင့် ရေဖျန်းသန့်စင်ပေးနိုင်ပါသည်။
. Radio,CD,MP3 AUX,I pop,USB Connection Radio, CD, MP3 များအသုံးပြုနိုင်သော Audio System 30 B စနစ်တပ်ဆင်ထားသဖြင့်ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံအရည်အသွေးရရှိစေပြီးကားမောင်းနေစဉ်အတွင်းရေဒီယို၊FM စသည်တို့ဖမ်းယူနား ဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
. Dual-Zone full auto climate control System သည် ကား၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့် ညာဘက်ခြမ်းတို့ကို အပူချိန်ကွဲပြားစွာ ထိန်းချုပ်မှုပေးထားနိုင်သည့်အတွက် ကားတစ်စီးထဲတွင် အဲကွန်း၏ Temperature ကိုလိုသလို အရှေ့အနောက်၊ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီ ထားရှိအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် အအေးဒဏ်မခံနိုင်သူ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် အအေးနှစ်ခြိုက်တတ်သူ လူငယ်များ အတူတကွစီးနင်းရာတွင် အဆင်ပြေမှုများကို ရရှိစေပါသည်။
. ကားနောက်ခန်းသို့လည်း Rear Air conditioning Vent မှတဆင့် Air Con လေပေးနိုင်သည့် window နှစ်ပေါက်ပါရှိပါသည်။
. ပုံမှန် Steering wheel များနှင့်မတူညီဘဲ D shaped steering wheel ဖြစ်၍ Design မှာလှပဆန်းသစ်စေပြီး Steering wheel ၏အနေအထားကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး (comfort)ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ပုံမှန် Steering wheel အနေ အထား (Normal)ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Steering ကိုအနည်းငယ်လေးသော(Spot) အနေအထား ဖြင့်သော် လည်းကောင်း မိမိစိတ်တိုင်း ကျချိန်ညှိနိုင်သော Drive Mode System လဲပါရှိပါတယ်
. Electric Parking Brake စနစ်ဟာရိုးရိုး Hand brake များထက် ပိုမိုအားသာချက်မှာ Manual လက်ဖြင့် ဆွဲ/ချ စရာမလိုပဲ ခလုပ်နှိပ်ရုံဖြင့် parking brake ဖြစ်ပီး ကားပြန်ထွက်လျှင် လီဗာနင်းရုံဖြင့် Auto Parking brake ဖြုတ်ပးသောစနစ်ပါဝင်ပါသည်။
. KIA Optima တွင်ပါဝင်သော Electric Stability Control System သည် Wheel Speed Sensor နှင့် Steering AngleSensorsတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်ကားလက်ကိုင်၏တည်ငြိမ်မူနှင့်မတော်တဆဖြစ်ခြင်းမှကြိုတင်ကာကွယ်ပေးပါသည်။
. alloy ခြေနင်းပြားအားသုံးထားခြင်းကြောင့် ဘရိတ်,လီဗာနင်းရာတွင် ချော်ထွက်မှုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါသည်။
. KIA Optima ၏Sound System မှာ Infinity Sound System ဖြစ်ပြီး Speaker (8) လုံးပါဝင်သောကြောင့် Bass အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး Speaker ကိုအသံကုန်ကျယ်လောင်စွာဖွင့်ထားသောငြားလည်း အံသြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ဆူညံအက်ကွဲသံလုံးဝမဖြစ်ပေါ်စေပဲကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြင့် မူရင်းအသံသွင်းထားသည့်အတိုင်း နားဆင်နိုင်ပါသည်။
. Auto Defog Systemသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲ မှုကြောင့် ရှေ့လေကာမှန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း၊ မှန်ရေငွေ့ ရိုက်ခြင်းများကို အော်တိုမစ်တစ် ကြည်လင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသော အန္တရာယ် ကင်းရှင်း စွာမောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
. ကားပါကင်ထိုးရာတွင် ကူညီပေးသော စနစ်ဖြစ်သည်။ ကား၏အရှေ့တွင် Sensor4လုံးနောက်တွင် Sensor4လုံးဖြင့်အာရုံခံ၍ ဒိုင်ခွက်တွင်းအချက်ပြသော စနစ်ပါဝင်သောကြောင့် ပါကင်ထိုနေစဉ်အတွင်း မတော်တဆထိခိုက်မိခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Selling Price 39,000
30% Down Payment 12,636
Monthly Payment For 1 Year 2,438
30% Down Payment 12,909
Monthly Payment For2Years 1,298
30 % Down Payment 13,182
Monthly Payment For3Years 920